တစ်ဦးကကွတ်ကျွန်းစုများဖောင်ဒေးရှင်းက ADDED အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အတူရိုးရာအခြေခံအုတ်မြစ်သည်ပညတ်တရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကပိုပြီးခက်ခဲတစ်ဦးတည်ထောင်သူရဲ့အကြွေးပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်များ၏တရားဝင်မှုကိုစိန်ခေါ်ရန်အဘို့အအောင်အပါအဝင်ဆက်ပြောသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပါဝင်သည်။
2012 ၏ကွတ်ကျွန်းစုများဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေ (က "အက်ဥပဒေ") ဖွဲ့စည်းရေး, မှတ်ပုံတင်, ခွင့်ပြုလှုပ်ရှားမှုများ, သူတို့၏အမြစ်ကို၏ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။
တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီး, အကွတ်ကျွန်းစုတစ်ခု Associated ပြည်နယ်နှင့်နယူးဇီလန်၏ဘုံ၏ဧရိယာဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကွတ်ကျွန်းစုနယူးဇီလန်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးပေးနှင့်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်အတူ 1965 အတွက်ပြည်တွင်းရေး Self-အစိုးရခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
• လုံးဝနိုင်ငံခြားရေး: ပညတ္တိကျမ်းနိုင်ငံခြားသားများမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းတည်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူရိုးအမြစ်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါတည်ထောင်သူ၏အမည်များ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဘက်တော်သားမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖော်ပြချက်များနှင့်တည်နေရာများကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
• အခွန်လွတ်: အမှီတကဲနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအခွန်မဆိုအမျိုးအစားမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ သို့သော်အမေရိကန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများနေသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကသူတို့အစိုးရတွေကအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: ပိုင်ဆိုင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုခြိမ်းခြောက်အခြားနိုင်ငံများမှဥပဒေများအသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အကြွေးအခြေခံအုတ်မြစ်သို့မဟုတ်အဲဒါကိုပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းစိန်ခေါ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: အဆိုပါဥပဒေများကိုအတင်းအကျပ် heirship နှင့် ပတ်သက်. အခြားနိုင်ငံများဥပဒေများအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ ရိုးအမြစ်ကိုတစ်မိသားစုရဲ့အိမ်ခြံမြေအစီအစဉ်အများအပြားကိုသားစဉ်မြေးဆက်အဘို့နောက်ဆုံးမှခွင့်ပြုစဉ်အမြဲပြုရသောသက်တမ်းရှိသည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်နှစ်ခုရက်အတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: နယူးဇီလန်၏ Associated ပြည်နယ်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့တရားဝင်ဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယပါတီများကအခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်မယုံကြည်မှု, ကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကိုသိမှတ်ဒါရိုးအမြစ်ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို "ဖောင်ဒေးရှင်းက" နဲ့အဆုံးသတ်နာမည်တစ်ခုအသုံးပြုရမည်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့တူပြီး settlor နှင့်ဂေါပကအကြားတရားဝင်သဘောတူညီချက် (ကန်ထရိုက်) ဖြစ်ပါသည်သောယုံကြည်မှုနှင့်မတူဘဲသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ရိုးအမြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုခေါင်းစဉ်ကိုင်ထားနှင့်တရားစွဲမှု file နိုင်တော့မည်နှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲနိုင်ပါတယ်။
တိုက်မြစ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဆင်တူနေစဉ်တွင်, ကရှယ်ယာရှင်များမရှိပါ။ တစ်ဦးယုံကြည်မှုဆင်တူတဲ့ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်, ဒါပေမယ့်တည်ထောင်သူဖောင်ဒေးရှင်းရန်ပုံငွေနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပဒေသာပင်များလည်းရှိရပါမည်။ တတိယပါတီတည်ထောင်သူဖြစ်ခြင်းမပါဘဲပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလှူဒါန်းပေမည်။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများတစ်ဦးလိုအပ်ချက်မဟုတ်, အမြစ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်သို့မဟုတ် Non-ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။ တစ်ဦးကရည်ရွယ်ချက်သဘာဝလူတစ်ဦးအတှကျအကြိုးသို့မဟုတ်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အခြေခံပြီးမှနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောလျှင်ယင်း၏ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တစ်ဥပဒေရေးရာ entity မှတဆင့်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
အမှီတကဲဟာသူတို့ရဲ့သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. အချိန်မကန့်သတ်ရှိသည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေတိုက်မြစ်အဘို့ကိုသာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဟာကွတ်ကျွန်းစုများကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဤအကွတ်ကျွန်းစုတရားရုံးချုပ်အတွက်အမြစ်ကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲမှု file မှအကြွေးတွန်းအားပေးသည်။
ထို့အပြင်အက်ဥပဒေလိုမျိုးတရားစွဲဆိုမှု file ဖို့ကန့်သတ်တစ်ခု2တစ်နှစ်ပညတ်တော်အတိုင်းတရားရုံးချုပ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဆန့်ကျင်တရားစွဲမှုဖြည့်စွက်အကြွေးမှအတော်ကြာအတားအဆီး, နေရာ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တိကျသောပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်သောအခါဤ2တစ်နှစ်န့်သတ်ချက်ကစတင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တစ်ဦးမြီရှင်အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများအတွက်သက်သေများ၏အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းဖြစ်သော "ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်" သူသို့မဟုတ်သူမ၏တောင်းဆိုမှုများသက်သေပြရပါမည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ကြွေးရှင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်အဘယ်သူမျှမပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုတရားရုံးချုပ်ရဲ့အမှုရှုံးသောအခါဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေအနေနဲ့အိမ်ခြံမြေကွယ်လွန်သူတကာထဲကအ left သောအမွေခံထည့်သွင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအတင်းအဓမ္မ heirship ၏အခြားနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေများတားမြစ်ထား။ ဤသည် disinherited ကလေးများ, ကွယ်လွန်သူလက်ထပ်မဟုတ်ကြတဲ့သူအမြိုးသမီးမြားထံမှအမျိုးအနွယ်နှင့်အခြားသူများနိုင်ငံခြားဥပဒတစ်ရပ်အိမ်ခြံမြေမှအမွေခံအဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုအိမ်ထောင်ဖက်ဟောင်းတို့ပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။
တစ်ဦးမြီရှင်တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းဆန့်ကျင်ကွတ်ကျွန်းစုတရားရုံးချုပ်ရှေ့တော်၌တရားစွဲဆိုမှုအတွက်နိုင်ရာနိုင်သည့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအတိုင်းတည်ထောင်သူကွှေးဖိနှိပျဖို့ရည်ရွယ်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းအဖြစ်အခါတည်ထောင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု (တိကျတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု) ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်သက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါတယ် အခြေခံအုတ်မြစ်။ ဤအရာသည်အလွန်လေးလံသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, န့်အသတ်အတားအဆီးများ၏2တစ်နှစ်ပညတ်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အမည်, ရည်ရွယ်ချက်, အမည်နှင့်ဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များ၏လိပ်စာ: တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကဲ့သို့သောအခြေခံသတင်းအချက်အလက်င်တစ်ဦးကျမ်းစာ၌ရေးထားဥပဒေရေးရာတူရိယာရှိရမည်။ ဒါဟာမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းတစ်ခုတည်းသောတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အမှီတကဲတို့သည်အက်ဥပဒေကိုလိုက်နာရသောကျမ်းစာ၌ရေးထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောအခြေခံစည်းမျဉ်းများအနေဖြင့်အပြင်အခြေခံအုတ်မြစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖော်ပြရာနှငျ့အကြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည် (သို့မဟုတ်ပါလိမ့်မည်) သူကား, အခြေခံအုတ်မြစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံကိုဖော်ပြရန်နှင့်မည်သို့သူတို့အတှကျအကြိုး။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြောင်းနှင့်အစိုးရနှင့်အတူတင်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်။ သူတို့ကမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အားဖြင့်ကျင်းပမည့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
ထို့အပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ, functions များ, နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ခန့်အပ်ထားသောလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။ တစ်ဦးဘက်တော်သားအဖြစ်ခန့်အပ်လျှင်အဘယ်အရာကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသူသို့မဟုတ်သူမရှိပါလိမ့်မယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်အနာဂတ်ပဒေသာပင်များလည်းများ၏ဖော်ပြချက်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်မှဖြန့်ဝေနေကြသည်ကိုဘယ်လို။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတက်အနာနှင့်ဖျက်သိမ်းဘယ်မှာရှိသနည်းဟုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သူကိုမဆိုတိုင်းပြည်ကနေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသဘာဝအပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာအခြေခံအုတ်မြစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖန်တီးဖို့နဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်မှရန်ပုံငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပဒေသာပင်များလည်း။
ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကသဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားများဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာထွက် set အဖြစ်ကောင်စီသည်၎င်း၏တာဝန်များကိုပြည့်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။ တစ်ဦးဘက်တော်သားတစ်ဦးယုံကြည်မှုအတွက်ကာကွယ်ဆင်တူသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာတာဝန်, လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမခန့်အပ်ဖယ်ရှားနှင့်လျော်ကြေးငွေမည်သို့အပါအဝင်ဘက်တော်သားများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။
•ရေးသားထားသော resolution ကိုအားဖွငျ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကကျင့်သုံးအားလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်။
ရိုးအမြစ်ကိုကော်ပိုရိတ်, ဝင်ငွေ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, ဆုကြေးဇူးကို, အမွေဥစ္စာနှင့်အိမ်ခြံမြေအခွန်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်မှဖောင်ဒေးရှင်းမှဖြန့်ဝေ taxable မရှိကြပေ။ သို့သော်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရန်သူတို့၏အခွန်ထမ်းလိုအပ်တချို့အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအဖြစ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' အိမ်မှာနိုင်ငံတွင် taxable ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါတည်ထောင်သူ၏အမည်များ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, စတင်အာဏာတည်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖော်ပြထားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တည်နေရာများကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်အမည်ရှိကြသည်မဟုတ်။
ပြင်ဆင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖန်တီးရန်အဘို့အကကြာအချိန်, မှတ်ပုံတင်တူရိယာပြင်ဆင်မှုအထိဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးမှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတနေ့တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လုံးဝနိုင်ငံခြား, privacy ကိုမျှအခွန်မြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်ခိုင်မာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကကွတ်ကျွန်းစုများဖောင်ဒေးရှင်းကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်။